UMabedi noKhumalo bazimisele ngesokuqeqesha | Isolezwe
UMabedi noKhumalo bazimisele ngesokuqeqesha
ezemidlalo / 16 May 2018, 12:02pm / Mthokozisi Mncuseni
AMAGAMA kaDoctor Khumalo nelikaPatrick Mabedi ayohlale njalo emataniswa neKaizer Chiefs, yingakho kungethusi ukuvela kokuthi bobabili bawugaqele umsebenzi wokuqeqesha iqembu ngokugcwele emuva kokusula kukaSteve Komphela.
Amasizini amathathu edlule abengawendlala kwiChiefs uma kuziwa ngasezicocweni, okubangele ukuthi usihlalo weChiefs, uKaizer Motaung, amemezele ingakapheli isizini ukuthi uzokwenza izinguquko ezinqala eqenjini lonke.
Kuze kube manje akukacaci ngozothatha umsebenzi oshiywe wuKomphela ngaphandle kwamahlebezi akhomba inqwaba yabaqeqeshi abadume phesheya kwezilwandle. UKhumalo, obesesihlalweni sokuqeqesha emdlalweni wokugcina weBaroka FC, uthe ngeke azibe uma ebizwa wumuntu amfanisa noyise.
Ngesikhathi esifanayo uMabedi, osebe khona kwiChiefs iminyaka njengomdlali, ukaputeni nephini, uthe ngeke enqabe uma engacelwa ngoba ukuqeqesha iChiefs kuyiphupho lakhe leminyaka.
UMabedi, owayengukaputeni weMalawi, uthathe umsebenzi njengebamba emuva kokusula kukaKomphela waqala ngenduku kwiLamontville Golden Arrows. Emidlalweni yakhe emithathu ebambile unqobe emibili (Maritzburg United ne-Ajax Cape Town) okulandelwe wukuthi iChiefs iqede endaweni yesithathu yase izibekisela indawo kwiCAF Confederation Cup ngesizini ezayo.
“Ebengikuceliwe ngikholwa wukuthi ngikwenze ngendlela. Konke okuzokwenzeka kusukela manje angikwazi futhi ngeke ngikubhule. Angazi ukuthi yini ehlelwa yiqembu kodwa uma ufuna ukwazi ukuthi ngiwubhekile yini umsebenzi ngokugcwele, yebo ngiwubhekile. Uma nginikwa ngeke ngikwazi ukwenqaba ngoba ngiyilokhu engiyikho nje kungenxa yaMakhosi,” kusho uMabedi.
Indlela akhulume ngayo ebuzwa ngomsebenzi uKhumalo, oseke waqeqesha phambili kwiChief, ikhombise izimpawu zokuthi kukhona akwaziyo.
“Kunzima ukuphendula kodwa akekho ongazi ukuthi ikhaya lami yiChiefs. Ngalokhu angisho ukuthi akangahlonishwa umqashi wami (usihlalo weBaroka) kodwa uma kukhona iChiefs efuna ukukwenza angiyivimbi ukuba ixoxe naye usihlalo wami. Kwazi bani mhlawumbe izingxoxo seziqalile nje,” kusho uKhumalo sakubhuqa.